मुख्यमन्त्रीका ? यी हुन् सम्भावित अनुहार |
मुख्यमन्त्रीका ? यी हुन् सम्भावित अनुहार
काठमाडौं -प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको नतिजा आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचन परिणाम नआउँदै सात प्रदेशका भावी मुख्यमन्त्री को हुन् भनेर चर्चा सुरू भइसकेको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फका ३३० सिटमध्ये ३१६ को गणना सकिएको छ र वाम गठबन्धनले हालसम्म करिब ७४ प्रतिशत जित हासिल गरेको छ । ३१६ मध्ये हालसम्म २३२ स्थानमा जित पक्का गरिसकेका छन् ।
प्रदेश १ मा एमालेका शेरधन राई , भीम आचार्यले मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका छन् । एमाले, माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीमा आ–आफ्नै दाबी प्रस्तुत गरेका छन् । तथापि एमालेकै दाबी बलियो देखिएको छ । १४ जिल्ला समेटिएर बनेको प्रदेश १ मा ५६ सिट छ । जसमा एमाले एक्लैले ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।माओवादी केन्द्रले १० स्थान जितेको छ । प्रत्यक्षतर्फका २८ सिटमा एमालेले १६ स्थान जितेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले ६, कांग्रेसले ४ स्थान र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १ स्थान जितेको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत र राष्ट्रिय जनता पार्टीका महासचिव मनीषकुमार सुमनको चर्चा छ । हालसम्मको नतिजा हेर्दा प्रदेश नम्बर २ मा गैरमधेसवादी दलको सरकार बन्ने सम्भावना सकिएको छ । २ नम्बर प्रदेशमा पर्सादेखि सप्तरीसम्म ८ जिल्ला छन् र प्रदेश सभातर्फ ६४ सिट रहेको छ । जसमा राजपा–संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनले ३२ सिट ल्याएका छन् । र, समानुपातिकतर्फ पनि मधेसवादी गठबन्धनले अग्रता लिएकाले सरकार बनाउन समस्या देखिँदैन । तर, २ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि राजपा र फोरम दुवैले दाबी गरेका छन् ।
एमालेका आधा दर्जन आकांक्षी छन् । र, सबैले चुनाव जितेका छन् । एमालेका आकांक्षीमध्ये सशक्त दावेदार हुन् पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य । उनले काठमाडौं– ८ (ख) बाट ५ हजार १६९ मत ल्याएर निर्वाचित भएकी छन् । त्यस्तै अर्का दाबेदार हुन्– पोलिट्ब्युरो सदस्य राजेन्द्र पाण्डे । उनी धादिङ– १(क) बाट २७ हजार २३२ मत ल्याएर निर्वाचित भए ।
तीन नम्बर प्रदेशका प्रत्यक्षतर्फका ६६ सिटमध्ये एमाले एक्लैले ४१ सिटमा विजय हासिल गरेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्रले १४ र कांग्रेसले जम्मा ७ स्थानमा जित दर्ता गरेको छ ।यसरी हेर्दा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनको ५४ सिट पुग्छ । सरकार बनाउन आवश्यक संख्या पुग्नेमात्रै होइन, दुई तिहाइ नै हुन्छ । तर, मुख्यमन्त्री टुंग्याउन गठबन्धनलाई सहज छैन । अर्का पोलिटव्युरो सदस्य पशुपति चौलागाईं दोलखा– (ख) बाट २० हजार ५८ मत ल्याएर निर्वाचित भए । उनी पनि मुख्यमन्त्रीकै दाबेदार हुन् । यता सिन्धुपाल्चोक– १ (क)बाट विजयी एमाले पोलिटब्युरो सदस्य अरूण नेपाल पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीकै आकांक्षीका लाइनमा उभ्याएका छन् ।
एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका लागि पृथ्वी सुब्बा गुरूङ र किरण गुरूङको नाम चर्चामा छ । निर्वाचनअघि नै किरण गुरूङले मुख्यमन्त्री बन्नकै लागि आफू प्रदेशमा उमेलदवार बनेका थिए ।३६ सिट रहेको ४ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन नै अगाडि रहेको छ । हालसम्म प्रदेश ४ मा एमालेले १५ स्थान जितेको छ भने २ मा अग्रता कायम गरेको छ । माओवादी केन्द्रले ८ स्थान जितेको छ । कांग्रेसले ५ स्थानमात्रै जित्न सकेको छ । दुवै पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । त्यसमध्ये सुब्बा सचिव एवम् संगठन विभाग प्रमुख हुन् । पृथ्वीसुब्बाले लम्जुङ– (ख)बा २३ हजार ८८ मत ल्याएर जितेका हुन् । किरण गुरूङले तनहुँ– २(ख) बाट १८ हजार २५६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् ।
पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेबाट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल एकल प्रतिस्पर्धी छन् । प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट रहेको प्रदेश पाँचमा एमाले एक्लैले २८ सिट जितेको छ । त्यस्तै, वाम गठबन्धनको अर्को घटक माओवादी केन्द्रले १२ सिट जितेर २ मा अग्रता कायम राखेको छ । कांग्रेसले पाँच नम्बर प्रदेशमा ७ सिटमात्रै जितेको छ । दाङ– २(क) बाट २० हजार ७२३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका पोखरेल मुख्यमन्त्री बनाउने निश्चित भएपछि प्रदेशमा उठ्न राजी भएका हुन् । यसअघि ०७० सालमा संविधानसभा सदस्यमा पराजित पोखरेलले दाङमा पार्टी संगठनमा निकै सुधार गरेका छन् । पोखरेलकै कारण गत स्थानीय तहमा एमालेले दाङमा उत्साहजनक जित हात पारेको थियो । र, अहिले पनि दाङका ९ स्थानमध्ये कांग्रेसले एक स्थानमात्रै जित्यो । दाङ– ३(क)बाट डिल्ली चौधरीमात्रै निर्वाचित भए ।
प्रदेश ६ मा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य प्रकाश ज्वाला पनि दावेदार छन् । प्रदेश ६ को प्रत्यक्षतर्फको २४ सिटमा एमालेले १४ सिटमा विजय हासिल गरेर पहिलो बनेको छ । त्यस्तै, माओवादी केन्द्रले ९ स्थान जित्दा कांग्रेसले एकस्थान जीवनबहादुर शाहीमात्रै निर्वाचित भए ।
सल्यान– (ख)बाट १९ हजार ८३६ मत ल्याएर निर्वाचित भएका प्रकाश ज्वाला पनि पार्टी नेतृत्वले मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकाले प्रदेशमा उठेको दाबी गर्छन् । प्रदेश ६ मा माओवादी केन्द्रको पनि दाबी छ । प्रदेश– ६ माओवादीले पाउँदा बलियो दाबेदार हुन्– पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही । उनी कालिकोट– (ख)बाट १२ हजार १५३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन् ।
एमाले पोलिटव्युरो सदस्य एवम् पूर्व उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाको नाम चर्चामा छ
प्रत्यक्षतर्फ ३२ सिट रहेको प्रदेश ७ मा वामपन्थी नै अग्रस्थानमा छ । एमालेले १७ र माओवादीले १० स्थान जितेका छन् भने कांग्रेसले ४ स्थानमात्रै जित्न सकेको छ
प्रदेशमा ३१६ को परिणाम सार्वजनिक
सबै प्रदेशमा वामगठबन्धनको दुई तिहाई, प्रदेश २ मा मधेशवादी बहुमतमा
सात प्रदेशको सम्भावित सत्ता समिकरण
छ प्रदेशमा बाम सरकार
प्रमुख दलका सम्भाबित मुख्यमन्त्रीका दाबेदार
एमाले २, माओवादी केन्द्र १ क्षेत्रमा विजयी, कांग्रेसले खाता खोल्न…
प्रतिनिधिसभाका १६४ र प्रदेशका ३२९ क्षेत्रको अन्तिम नतिजा : कसले कति…
तराईका १२ जिल्लामा पनि एमाले अगाडि
प्रदेशमा ३१६ को परिणाम सार्वजनिक काठमाडौं - सातवटा प्रदेशका ३३० प्रदेश सभा सिटमध्ये ३१६ को…
सबै प्रदेशमा वामगठबन्धनको दुई तिहाई, प्रदेश २ मा मधेशवादी बहुमतमा काठमाडौं -नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास भइरहेको प्रदेशसभाको निर्वाचनप्रति मतदाताको अपेक्षित ध्यान…
सात प्रदेशको सम्भावित सत्ता समिकरण काठमाडौं– मंसिर १० र २१ गते गते भएको प्रदेश र…
कुन दलले कति सिट जित्लान ? यस्तो छ दलको दाबी काठमाडौं -एमाले–नेकपा माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस तथा…